Sideed rabtaa inaad u degtid? Inteed rabtaa inaad degtid? Fursadaha yaallo Dalarna weey badan yihiin. Dalarna waxuu ka kooban yahay 15 degmadood, kulligoodna weey kala duwan yihiin. Maxaad rabtaa adiga? Guri ku yaal bartamaha magaalada ama guri ku yaal magaalada baadiyaheeda? Ama labadaas mid u dhaxeeya!
Maku fakareysaa inaad usoo guurtid meeshaan? "Usoo guur dalarna " waa meel jirtay laga soo bilaabo 2005. Laba qofood oo khibrad u leh gobolka Dalarna, a Carina Arnberg och David Cluer, ayaa ku caawinaya markaad usoo guureysid gobolka. Waxeey khibrad u leeyihiin adeegyada kala duwan ee gobolka iyo meela kala duwan warbixinadooda meesha laga helo, tusaale ahaan hadaad rabtid inaad ganacsi furatid waxey kaa caawinayaan jidka aad u mari laheyd, waxeey kaloo caawinayaan sida loo helo goobaha eey kamidka yihiin iskoollada xanaanada carruurta, iskoollada/waxbarashadaha kala duwan iyo adeega degmada ee dhinaca usoo guuritaanka.
Warbixin dheeraada oo ku saabsan sida loogu soo guuro gobolka Dalarna iyo warbixinno kaloo guud waxaad ka heleysaa Leva i Dalarna.
Qeeybaha waxsoosaarka ganacsi badankood weey yaallaan Dalarna. Hadeey ahaan lahaayeen shirkadaha caalamiga ah ee waaweyn sida SSAB iyo shirkadda awoodda ee ABB iyo shirkadaha dhexdhexaadka iyo kuwa yaryar kulligoodba. Waxaa ka jira shirkadaha qandaraasla qaatayaasha ah oo eey ka mid yihiin kuwa dhinaca soosaaridda cuntada iyo shirkadaha dalxiiska oo isugu jiro kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar, kuna baahsan gobolka oo dhan. laga billaabo alaabaha ceyriinka ah iyo kuwa farsamada ilaa dhinacyada adeega bulshada iyo caaimaadka. Toban sano gudahood saddax meelood hal meel shaqaalaha caafimaad ee Dalarna waxeey noqonayaan howl gab, waxana markaas loo baahnaan doonaa dad badala dadkaas oo eey tahay in la shaqaaleeysiiyo sanadadaan foodda nagu soo hayo. Gobolka Dalarna waxuu ku siinayaa jid nololeed fiican oo xagga shaqada ah.
Bogga internetka ee dalarna.se waxaa ka heleysaa leeman kale oo kugu xiraya degmoyinka kale sida xafiiska wax soosaarka dhaqaalaha, warbixin ku saabsan shirkadaha iyo taageerada la siiyo, ururyada waxsoosaarka dhaqaalaha.
Webside ka Framtid Dalarna waxuu rabaa in dhalinyarada gobolka Dalarna uu siiyo warbixin ku saabsan meelaha shaqada laga helo ee gobolka Dalarna. Webside kaas waxuu u qeybsanyahay saddax qeybood; sidaan ayaad shaqada u heleysaa, shaqooyinkee laga helaa Dalarna waxaana warxibin dhiibaya dadka iyaga shaqeeya. Waxaa kaloo yaal warbixin ku saabsan waxbarashada kala duwan ee taallo gobolka, sida shaqooyinka looga raadsado shirkadaha. Warbixin dheeraada ka akhri bogga internetka ee Dalarna.
Maamulka caafimaad ee Dalarna waxuu dadka gobolka iyo booqashada ku jooga u hayaa daryeel caafimaad oo eey ku jiraan daryeelka ilkaha iyo afka. Markaad adiga adiga ama qof wax kuu eh uu jirado, aadna u baahan tahay talo siin wakhtiga maalinta ah waxaad la xiriireysaa rugtaada caafimaadka. Rugaga caafimaad waxaad ka heleysaa meeshaan. Dhakhtarka rugta caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee caafimaad ayaa wax ka qaban cudurada caadiga ah, marka loo baahan yahay waxey u gudbiyaan dhakhaatiirta ku takhasusay. Markaad si degdeg ah ugu baahatid daryeel caafimaad waxaad wacdaa rugtaada caafimaadka ama 1177 Vårdguiden inta aadan aadin rugta lagu qaabilo cuduradda degdega ah. Hadaad caawimaad degdeg ah u baahatid adiga ama qof wax kuu ah waxaad wacdaa nambarka 112.
Hiddaha iyo dhaqanka waxuu sare u qaadaa korriimaha maskaxda qofka. Qiimaha qofka iyo sida loo hadlo, khayaaliga iyo wax soosaaridda, waxyaabahaas oo dhan weey xoogeysanayaan markaan wax abuureyno wax cusubna baraneyno. Heerka dadka meesha uu kor ugu qaadmo ayeey dimuquraadiyad ka habsoontaa. Goolka uu maamulka caafimaadka Dalarna tiigsanayo waxaa waaye inuu sii ballaarto isla markaana tayadiisu kor aad loogu qaado, laguna faafiyo gobolka oo dhan. taageeda la siiyo dhaqanka, horumarinta waxbarashada dadka, jaaliyadaha iyo iskoollada waxeey dadka degan meeshaan fursad u siinayaan sideey wax ugu geysan lahaayeen hormarinta bulshada. Dadka ka shaqeeya hiddaha iyo dhaqanka iyo waxbarashada waa la badinayaa tiradooda. Jawiga goobaha wax lagu qabsado oo la hormariyo waxuu keenayaa isku xirnaanshaha bulshaa, horumarka gobolka iyo dhaqaalaha oo kobca.
Butikssäljare Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Konditor , orientaliska bakverk Bagare/Konditor
VMF Qbera ek. förening söker en Vikesmätare till Heby Virkesmätare
VMF Qbera ekonomisk förening söker en Virkesmätare till Skinnskattebergssåg Virkesmätare
Kock , à la carte Sökes Leksand Kock, à la carte
Maskinförare / Anläggningsarbetare Väg-och anläggningsarbetare
Ungdomsprojektledare Projektledare: kultur, media, film
Engagerad högstadielärare Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Engagerad högstadielärare till Säter Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Sjuksköterska natt avdelning 50 Mora Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska avdelning 50 Mora Sjuksköterska, grundutbildad
Grundskollärare årskurs 1 - 6 Ullvi skola Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sjuksköterska inr. diabetes och hematologi till avd 61 vid Mora lasaret Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska inr. kardiologi till avd 62 vid Medicinkliniken Mora lasaret Sjuksköterska, grundutbildad
Vi söker GIS - ingenjör med stort intresse för 3D GIS-ingenjör
Slöjdlärare i trä och metall Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Skötare till Psykiatriska mottagningen Falun Skötare
Tandsköterskor , Folktandvården Domnarvet Tandsköterska
Dansledare för Knatteskutt Dans hos Sweden Sport Academy Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare
Bogga 1 ee ka mid ah 54
​Arbetarnas bildningsförbund wuxuu hayaa shaqooyin ah koorsooyin iyo kooxo waxbarasho.
Borlänge bandy waxey heystaan mashruuca barafkorka oo dadkoo dhan loogu tala galay: hadafkuna yahay in raad lagu sameeyo isdhaxgalka iyo kala duwanaanshaha naadiyaasha iyo degmada.
​Ett Falun för alla waxaa ka mid waxa ay heysato maqaaxidda luqadda, dubitaanka iyo solidda koorviga.
Waxey ka shaqeysaa dulqaadka iyo furfurnaanta. Waxyaalaha laga helo waxaa ka mid rug kulan (Shaah cabbdi, filin fiirsasho) iyo muxaadarooyin. Kontakt via e-post.
Ibn Rushd Mitt
​Ibn Rushd är ett Muslimskt studieförbund, waxey ka shaqeysaa si ay u xaqiijiso demoqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka, waxey si firfircoon uga shaqeysaa in ay adkeeyso hawiyada iswiidhishka muslimka ah. Waxey ka shaqeynaysaa doodda bulshada, soo saaraysaa qalab waxbarasho isla arkaasna soo bandhigaysaa bandhig balaaran o ah seminaaro, kooxo waxbarasho iyo barnaamijyo dhaqan.
​Immigrantinstitutet wuxuu kulansaday hey'ado kala duwan iyo ururo maxalli ah. Kuwaas waxaa ka mid ah ururadda ajaanibta ee maxalliga ah iyo ururadda dhalinyarada.
​Integrationsföreningen Almustafa waxey ka jirtaa Ludvika
IKF (Ururka haweenka ee caalamigaa) waa madalad ay ku midoobeen ururo badan oo iswiidhan ka jira kuwasoo ka shaqeeya isdhaxgalka iyo cunsirinimda. Ururada maxalliga ee ka jira Faluniyo Borlänge.
​JOKO - rug dhaqanada oo dhan ah. Waxey bexisaa niiko, muusik, muxaadarooyin, kooxo waxbarsho iwm. Waxey laga helaa Falun.
​Kvinnojourerna waa hey'ad uu doodda dumarka, kana madax-bannaan diin iyo siyaasadurureed. Dhammaan heegankadumarka waxey u heystaan aqoon xeeldheer ka hortagga ku xadgudubka dumarka.
​NBV waa xarako ka caagganaanta khamriga. Waxey la shaqeysaa waxbaridda dadka (folkbildning), kooxaha waxbarasho, xalqaddaha saaxiibtinimo, iskudubaridka dhaqanka. Falun waxaa ka jira mashruuc loo dhan yahay "Man Delar". Fikradduna waxey tahay ayadoo la isticmaalayo muusik, hees, iyo niiko in la kulmiyo dadka dacalada adduunka oo dhan si joogto ah.
Rädda Barnen Falun
Waa hey'ad xaqquqda carruurta taasoo ka shaqeysa in baahida carruurta,dantooda,iyo xuquuqdooda ay u helaan. Hey'adda wxey nashaadaad ka sameeysaa adduunka oo dhan waana ka madax-banaantahay diin iyo siyaasad.
Rädda barnen waxey ururo maxalli ah ku leedahay 11 ka mid ah degmada Dalarna waxeyna nashaadaad kala duwan u qabataa dadka cusub iyo ilmaha kaligood yimaadeen. Tusaalaha qaarkood waa caawinaada layliga, qolka luqadda iyo howlo laga qabto xeradda qaxootiga.
​Rättighetscentrum Dalarna waa xafiiska ka hortaga cunsirinimada. Rättighetscentrum wuxuu dhiibaa talo bixin bilaash ah oo uu siinayo dadka dareensan in la cunsiriyeeyey.
Röda Korset Dalarna
​Röda korset waxey degmada Dalarna oo dhan ku leedahay ururo maxalli ah waxeyna maamushaa nashaadaad kala duwa, tusaale ahaan meel lagu kulmo iyo dukaanka gacanlabaadka, maqaayad luqadeed, caawinaad layli, nashaadaad loogu tala galay ilmaha keligood yimid iyo nashaadaad ka qoys is helidda.
​Sensus waa dalad waxbarasho taasoo kor u qaadaysa su'aalaha adduunka oo dhan ah iyo weliba su'aalaha nolosha iyo kala duwanaashaha. Sensus waxey bixisaa kooxo waxbarasho.
​Tillsammansskapet waa gogosha ka hortaga cunsirinimada ee shabakada iyo ururada ka shaqeeynaya in ay adkeeyaan wadajirka bulshada maxalliga ah. Waxeey abuureysaa ´xarrumo kulan. Waxey ku taalaa Ludvika, smedjebacken, Mora, Falun iyo Borlänge.